Student Energy by Aye Thandar Aung - issuu
ကသက်ရှိသက်မ့အဲရာဟူသမျှကို Noun ဟုခေါ်သည်။
Nounမှာအကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့်၅မျိုးခွဲထားပါတယ်။ လူ၊တိရိစ္ဆာန်၊အရာဝတ္ထု၊ နေရာ၊စိတ်ကူးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Noun
အမ အထီး အဲဒီထဲမှာလူ
အထီး/အမ မရှိ = Neature Gender အထီး၊အမ
အထီးအမခွဲထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများသုံးနာမဖြစ်သည့် အရာဝတ္ထု၊ နေရာ စိတ်ကူး တွေမှာ အထီး/အမ မရှိဘူး (Neature Gender ဟုခေါ်ပါသည်။) Countable and uncountable Noun
မှာရေတွက်လို့ ရတဲ့နာမ် နှင့် ရေတွက်လို့မရတဲ့နာမ် (သို့မဟုတ်) ရေ တွက်ရန်ခက်ခဲသောနာမ်ဟူပြီး
I eatabanana every day. ကျွန်တော်ငှက်ပျောသီး နေ့တိုင်းစားတယ်။ I like bananas. ကျွန်တော်ငှက်ပျောသီးကြိုက်တယ်။
မှတ်ချက်။ Like ရဲ့နောက်ကပါတဲ့ Noun ဟာအများထည့်ပေးရမယ်၊ ရေတွက်လို့ရတဲ့နာမ် ဆိုရင် S ထည့်ရတယ် ရေတွက်မရတဲ့ နာမ် ကိုမူလအတိုင်းပဲထားပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးက Countable noun ဖြတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် (banana) က Singular noun ဖြစ်ပြီး (bananas) ကတော့ Plural ဖြစ်ပါတယ်။
ရေတွက်ရသောနာမ်တွေ့ရဲ့ရှေ့မှာ အရေအတွက်တွေကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ -‘one banana’ ‘two banana’ အစရှိသဖြင့် Examples: A ball isatoy. A cow hasatail. A book is on the desk. There isavillage over there. Do you haveaten-pound note? It wasn’t your fault. It was an accident. Uncountable noun ရေတွက်လို့လုံးဝမရသောနာမ်(သို့)ရေတွက်ရန်ခက်ခဲသော နာမ်တွေရှေ့မှာ အရေအတွက်ကိုထည့်လို့မရပါ။သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံရေတွက်ရန်ခက်ခဲသော နာမ်ရ့ေဲရှ့မှာ အရေအတွက်ထည့်သုံးပါသည်။ Eg.
I eat rice every day. ကျနော်နေ့ တိုင်းထမင်းစားတယ်။ I like rice. ကျနော်ထမင်းစားရတာကြိုက်တယ်။
ထမင်းက Uncountable noun ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့် ကပ်သီးကပ်သပ် ရေးမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ ရပါတယ်။ There are two rices on your cheek. မင်းပါးပေါ်မှာထမင်းလုံးနှစ်စေ့ရှိနေတယ်။ There are two white hairs on your head. မင်းခေါင်းပေါ်မှာဆံပင်ဖြူနှစ်ချောင်းရှိတယ်။ ဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ ရပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ရေတွတ်ရန်ခက်ခဲသော နာမ်လို့ တစ်ခုထပ်သိရအောင်ဒထီဲမှာဖြည့် ထားပေးခဲ့ပါတယ်။ Example Kate was listening to (some) music. There’s sand in my shoes. Do you have any money? It wasn’t your fault. It was bad luck. There is no electricity in this house.
We haven’t got enough water. B: A/An Singular conuntable noun တွေရဲ့ရှေ့မှာ a,an လိုက်ပေးရပါတယ်။ a/an/the မပါပဲရေးလို့ မရပါ။abeach
I want banana ရေးလို့မရပါ။I wantabanana လို့ရေးရပါသည်။ There’s been accident. လို့ရေးလို့မရပါ။ There’s been an accident . လို့ရေးရပါသည်။ ပြီးတော့ plural countable nouns ရှေ့တွင် a,an ,the မထည့်ပဲ သူ့ ချည်းသက်သက်ရေးလို့ ရပါတယ်။ I like bananas. ( bananas in general) Accidents can be prevented. သာမန်အားဖြင့် Uncountable noun ကို a/an ဖြင့်ရေးလို့ မရပါ၊ ‘a sand’, ‘a music’, ‘a rice’. နှင့်ရေးလို့ မရ။ Uncountable noun ကို countable noun ပြောင်းချင်ရင် a…..of ဖြင့်တွဲပြီးရေးကြပါတယ်။abowl /apacker /agrain of rice uncountable noun ရှေ့တွင် the,my,some မပါပဲ သူ့ချည်းသက်သက်ရေးလို့ရပါတယ်။ I eat rice every day. There’s blood on your shirt. Can you hear music? C: Some နှင့် any ကိုလည်း plural countable nounနဲ့ တွဲသုံးနိုင်သလို unconuntable noun နှင့်လည်းတွဲသုံးနိုင်ပါသည်။ We sang some songs. ကျွန်ုပ်တို့ သီချင်းဆိုသည်။(အချို့ )5Did you buy any apples? ပန်းသီးတွေဝယ်ခ့လဲား We listened to some music.
ကျွန်ုပ်တို့ သီချင်းနားထောင်တယ်။ (အချို့ ) Did you buy any apple juice? ခင်ဗျားပန်းသီးတွေဝယ်ခဲ့လား။ Many နှင့် few တို့ကို Plural countable noun နှင့်တွဲသုံးပြီး much တို့ littlတို့ကို uncountable noun နှင့်တွဲသုံးပါသည်။ We didn’t take many photographs. ကျွန်ုပ်တို့ ဓာတ်ပုံတွေအများမရိုက်ခ့ရဲဘူး။ I haveafew things to do. ကျွန်တော်တချို့ အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ရှိသေးတယ်။ I doesn’t have much money. ငါမှာပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူး။ှုI would likealittle salt on my soup. ငါဟင်းချိုထဲကိုဆားနည်းနည်းလောက်ထည့်ချင်တယ်။
Countable and uncountable2A: Noun အများစုဟာ countable နှင့် uncountable သကဲ့သို့ သုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အဓိပ္ပာယ်တော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ Countable: Did you hearanoise just now? (a specific noise ) ခင်ဗျားခုအသံတွေကြားလား (anoise = တိကျတဲ့ အသံaပါလို့ တိကျတဲ့အသံဖြစ်တယ်) I boughtapaper to read. (=anewspaper) ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ သတင်းစာဝယ်ခဲ့တယ်။ There’sahair in my soup! (=one single hair) ဆံပင်တစ်ပင်ကျွန်တော့စွပ်ပြုပ်ခွက်ထဲမှာရှိတယ်(ဆံပင်ကိုသီခြားပြောချင်လို့ ) You can stay with us. There isaspare room. (=aroom inahouse) အခန်းအပိုတွေရှိပါတယ် ခင်ဗျားကျနော်တို့ နဲ့ တည်းနိုင်တယ်။ I had some interesting experiences while I was travelling. (= things that happened to me) ကျွန်တော်အလည်ခရီးထွက်တုန်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့ အကြုံရခဲ့တယ်။ ( အဲဒီခရီးစဉ်ထွက်တ့အဲချိန်တုန်းကရခဲ့တဲ့အတွေ့ အကြုံကိုပြောတယ်)
7 Enjoy your trip. Haveagood time! ကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါစေ(ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာအတိအကျပြောချင်လို့ ပါ) She has been late for class six times this terms this term. သူမသည် စာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းချိန်ခြောက်ကြိမ်နောက်ကျဖူးသည်။ Uncountable: I can’t work here. There’s too much noise. ( not too many noises) ဒီမှာငါအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး အသံတွေအရမ်းဆူညံနေတာပဲ (ဒါကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရင် အသံပေါင်းစုံဖြစ်မယ် ဒါကြောင့် uncountable နဲ့ တွဲသုံးဖြစ်တယ်) I need some paper to write on. (= material for writing on) ကျနော်စာရေးဖို့ စာရွက်လိုတယ် You have got very long hair. (not hairs) (= all the hair on your head) မင်းမှာဆံပင်အရှည်ရှိပါလား (ဒီထဲမှာသေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် hair ရဲ့အရှေ့မှာaမထည့်ထားတာတွေ့ ရလိမ့်မယ်) You can’t sit here. There isn’t room. (= space) ခင်ဗျားထိုင်ဖို့ နေရာမရှိဘူး ( ဒီထဲမှာ room ကနေရာ ကိုပြောပါတယ်) They offered me the job because I hadalot of experience. ကျနော့် မှာအတွေ့ အကြုံများလို့ သူတို့ ကျွန်တော်ကိုအလုပ်တွေကမ်းလှမ်းတယ်။ (ဒီထဲမှာalot of ကိုတွေ့ ရလိမ့်မယ်alot of ကတော့ countable နှင့် uncountable နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ ရတယ်) I can’t wait.I haven’t got time. ငါမှာအချိန်မရှိလို့မစောင့်နိုင်ဘူး။ We have spent too much time on this week. ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်စာလုပ်တာအချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့တယ်။ Coffee/tea/juice/beer etc. (drinks) are normally uncountable: ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ သစ်သီးရည်၊ ဘီယာ တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် I don’t like coffee very much. ကျနော်ကော်ဖီသိပ်မကြိုက်ဘူး။ But you can sayacoffee ( =acup of coffee), two coffees (=two cups) etc: (ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်acup of coffee )
Two coffees and an orange juice, please. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကော်ဖီ နှစ်ခွက်နဲ့ လိမ္မော်ရည်ပေးပါ။ B: The following nouns are usually uncountable: အောက်မှာဖော်ပြတဲ့ nouns အားလုံးဟာသာမန်အားဖြင့် uncountable မှာပဲသုံးသည်။
You can’t use a/an with these noun: (a/an နဲ့ အောက်မှာဖော်ပြသော နာမ် နှင့်သုံးလို့ မရပါ)
I’m going to buy some bread. or…….aloaf of bread. (notabread )
ကျွန်တော်ပေါင်မုန့် သွားဝယ်မယ်… (သို ) ပေါင်မုန့် တစ်လုံးလောက် (a bread သုံးလို့ မရပါ)
work Enjoy your holiday! I hope you have good weather. ( notagood weather) ခင်ဗျားအားလပ်ရက်မှာအရမ်းပျော်ပါစေ ခင်ဗျားကောင်းအချိန်ဖြစ်ပါစေ။ (a good weather မဟုတ်ပါ) These nouns are not usually plural ( so we do not say ‘breads’, ‘furnitures’ etc.) ဒီ noun တွေကိုအပုံမှန်အားဖြင့် plural မဟုတ်ပါ။ (‘breads’, ‘furnitures’) Where are you going to put all your furniture? (not furnitures ) ခင်ဗျားအိမ်သုံးပရိဘောဂတွေဘယ်မှာထားမှာလဲ။ Let me know if you need more information. (not informations) ခင်ဗျားသတင်းအချက်လက်တွေလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပေးပါ။ News is uncountable, not plural: သတင်းက uncountable ပါ plural မဟုတ်ပါ။ The news was very depressing. (not The news were ) ဒီသတင်းက စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ You cannot use singular countable nouns alone (without a/the/my etc.): She never wearsahat. (not she never wears hat) သူမဦးထုပ်ဘယ်တော့မှမဆောင်းဘူး။ Be careful of the dog. (not Be careful of dog) ခွေးသတိထားပါ Whatabeautiful day!
ဘယ်လောက်သာယာတဲ့နေ့လဲနော် I’ve gotaheadache. ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်နေတယ်။ B: We use a/an ….to say what kind of thing or person something/ somebody is: ဘယ်လိုအရာဝတ္ထု(သို့)ဘယ်လိုလူမျိုး စသည်ဖြင့်အမျိုးအစာကိုပြောချင်ရင် ရှေ့တွင် a/an ထည့်သုံးပါသည်။ That’sanice table. ဒါစားပွေဲကာင်းတစ်လုံးပဲ။ In the plural we use the noun alone (not some….): Those are nice chairs. (not some nice chairs) ဒီဟာတွေက ကောင်းတဲ့ထိုင်ခုံတွေပဲ။ Compare singular and plural: A dog is an animal.
Are youagood drive?
We say that somebody hasalong nose/anice face/ blue eyes/ small hands etc.: Jack has gotalong nose.
(not the long nose)
(not the blue eyes)
Remember to use a/an when you say what somebody’s job is: တစ်စုံတစ်ယောက်ရ့အဲလုပ်ကိုပြောချင်ရင် ရှေ့တွင် a/an ထည့်သုံးသည်ကိုသတိ၇ပါ။ ဥပမာ-Sandra isanurse.
(not Sandra is nurse)
Would you like to be an English teacher? C: You can use some with plural countable nouns. We use some in two ways. (1) Some =anumber of/afew of/apair of: I’ve seen some good films recently. (not I’ve seen good films) ငါအခုတစ်လော ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးပြီ။
Some friends of mine are coming to stay at the weekend. ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ပိတ်ရက်မှာလာလည်လိမ့်မယ်။ I need some new sunglasses. (=anew pair of sunglasses) ငါနေကာမျက်မှန်အသစ်လိုတယ်။ Do notာuse some when you are talking about things in general. ကျွနုပ်တို့ ရေဘူယျအားလုံးကို ပြောချင်ရင် some ကိုသုံးလို့မရပါ။ I love bananas. (not some bananas) My aunt isawriter. She writes books. (not some books) Sometimes you can make sentences with or without some (with no difference in meaning): တစ်ခါတစ်ရံ some ထည့်ထည့်၊မထည့်ထည့် သုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာThere are (some) eggs in the fridge if you’re hungry. အကယ်လို့မင်းဗိုက်ဆာရင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဥတွေရှိတယ်။ (2) Some = some but not all: 50% အောက်လို့ပြောချင်ရင် someကိုသုံးပါသည်။ ***Some children learn very quickly. (but not all children) ***Tomorrow there will be rain in some places, but most of the country will be dry. မနက်ဖြန် နေရာအနည်းငယ်မိုးရွာလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် ကျေးလက်ဒေသတော်တော်များများတော့ ခြောက်သွေ့လိမ့်မယ်။ A / an and the ဘာမှမသိသေးခင်(စမိတ်ဆက်) မှာပြောရင် a/an ထည့်သုံးပြီး သိသွား၇င်(သို့)တိကျသွားရင်တော့ the ကိုသုံးပါသည်။ Study this example: Joe says ‘a sandwich’, ‘an I hadasandwich and an apple for lunch. The sandwich wasn’t very good, but the apple was nice.
apple’ because this is the first time he talks about them. Joe now says ‘the sandwich’, ‘the apple’ because Karen knows which sandwich and the apple that he had for lunch.
A man andawoman were sitting opposite me. The man was American, but I think the woman was British. လူတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ငါ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ထိုင်နေခဲ့တယ်။ဒီလူကြီးကတော့ အမေရိကန်ပဲ။ဒါပေမယ့် ဒီအမျိုးသမီးကတော့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်မယ်။ When we were on holiday, we stayed atahotel. Sometimes we ate at the hotel and sometimes we went toarestaurant. အားလပ်ရက်တွေရောက်သောအခါ ငါတို့ဟိုတယ်မှာတည်းခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဟိုတယ်မှာထမင်းစားပြီး တစ်ခါတစ်လေတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားခဲ့ကြတယ်။ B: We use the when we are thinking ofaspecific thing. Compare a/an and the: တိကျတဲ့အရာကိုပြောချင်ရင် the ကိုသုံးပါသည်။ Tim sat down onachair. (perhaps one of many chairs in the room) တင်မ် သည် ထိုင်ခုံတစ်လုံးမှာထိုင်ခ့တဲယ်။ Tim sat down on the chair nearest the door. (aspecific chair) တင်မ် သည် တံခါးနားကထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ခ့တဲယ်။ Paula is looking forajob. (notaspecific job) ပေါ်လာ အလုပ်တစ်ခုရှာနေတယ်။ Did Paula get the job the applied for? (a specific job) ပေါ်လာလျောက်ထားတဲ့ အလုပ်ရသွားပြီလား။ Have you gotacar? (notaspecific car) မင်းမှာကားရှိလား။ I cleaned the car yesterday. (=my car) ငါမနေ့ငါ့ကားကိုရေဆေးခဲ့တယ်။ C: We use the when it is clear in the situation which thing or person we mean. For example, inaroom we talk about the light/the floor/ the ceiling/ the door/ the carpet etc.: ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ အရာဝတ္ထု၊လူ ရဲ့တိကျတဲ့အခြေအနေကိုပြောချင်ရင် the ကိုသုံးပါတယ်။ ဥပမာCan you turn off the light, please? ကျေးဇူးပြုပြီး မီးပိတ်ပေးနိုင်မလား။ I tookataxi to the station. (=the station in that town) ကျွန်တော် ဘူတာရုံကို ကားတစ်စီးငှားခဲ့တယ်။ (inashop) I’d like to speak to the manager, please. (=the manager of this shop)
ကျွန်တော်ဆိုင်မန်နေဂျာနဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ In the same way, we say (go to) the bank, the post office: I have to go to the bank and then I’m going to the post office. (The speaker is usually thinking ofaspecific bank or post) ကျွန်တော် ဘဏ်ကိုသွားမယ် ပြီးရင်တော့ စာတိုက်ကိုသွားမယ်။ We also say (go to) the doctor/ the dentist: လူတစ်ယောက်ရ့အဲလုပ်ကိုပြောချင်ရင်လည်း ရှေ့တွင် the ထည့်သုံပါတယ်။ Caroline isn’t very well. She’s gone to the doctor. (= her usual doctor) ကာရိုလင်း နေသိပ်မကောင်းဘူး။သူမဆရာဝန်ဆီသွားခဲ့တယ်။ I don’t like going to the dentist. ငါသွားဆရာဝန်ဆီသွားရတာမကြိုက်ဘူး။ Compare the and a: I have to go to the bank today. ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘဏ်ကိုသွားရမယ်။ Is thereabank near here? ဒီနားမှာ ဘဏ်တစ်လုံးများရှိသလား။ I don’t like going to the dentist. ကျွန်တော်သွားဆရာဝန်ဆီ သွားရတာမကြိုက်ဘူး။ My sister isadentist. ကျွန်တော်ညီမသည် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ We say ‘onceaweek/ three timesaday/ £1.50akilo’ etc: တစ်လမှာ(သ)ို့တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ် ၊တစ်ကီလိုမှာ ဘယ်လောက်စသည်ဖြင့်ပြောချင်ရင်aကိုသုံးပါတယ်။ ‘How often do you go to the cinema?’ ‘About onceamonth.’ မင်းရုပ်ရှင်ရုံကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်သွားလဲ။တစ်လမှာတစ်ကြိမ်လောက်သွားတယ်။ ‘How much are those potatoes?’ ‘£1.50akilo.’ အာလူးတစ်ကီလိုဘယ်လောက်လဲ။တစ်ပေါင်ခွဲပေးရပါတယ်။ Helen works eight hoursaday, six daysaweek. ဟယ်လန်တစ်နေ့မှာ ရှစ်နာရီ၊တစ်ပတ်မှာ ခြောက်ရက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Unity isagood practise.